FANAFARANA AVY ANY IVELANY : Migalaboana ireo mpandraharaha sy mpibizina pakistaney
Vary 2 000 kaontenera isan-taona avy any Pakistan no tonga eto Madagasikara, araka ny fanangonam-baovao natao. 7 février 2019
Hatramin’izao noho ny tsy fahampian’ny voka-bary sy ireo loza ara-boajanahary izay mamotika ny voly vary eto amintsika, dia mbola tsy afa-bela amin’ny fanafarana vary avy any ivelany hatrany i Madagasikara.
Mampiasa hafetsena ireo pakistaney mpibizina vary. Saika misoratra amina anarana malagasy avokoa ireo orinasa mpanafatra vary saingy pakistaney no tena tompony. Izany Mahesh Dodai izany no tena tompony. Ity farany izay mipetraka eto Madagasikara. Ilay pakistaney atao hoe B.Lal kosa no tompon’ny orinasa fanafarana azy any Pakistan. Any Pakistan no monina i B.Lal.
Vary natokana ho an’ny biby fiompy any Pakistan ireo tonga eto Madagasikara ireo, izay vidin’ny mpanafatra vary 206 dolara eo ho eo ny iray taonina. Natokana ho sakafom-biby saingy efa nosivanina manokana kosa dia vidin’ny mpanafatra vary eto amintsika 500 ka hatramin’ny 600 dolara ny iray taonina. Tsy mandoa hetra ireo vary ireo rehefa miditra satria efa mandoa vola 1 000 dolara isaky ny kaontenera ny mpanafatra.
Re araka ny loharanom-baovao fa anjakan’ny fampitomboana faktiora ny fanafarana vary eto amintsika. Misy ihany koa ny fampifangaroana vary tsara sy vary ratsy izay ahazoan’izy ireo tombony ambony dia ambony nefa tsy mifanaraka akory amin’ny faktiora aseho ny fanjakana tamin’ny vidiny nividianana an’ilay vary tany ivelany. Migalabona ireo pakistaney ary mifehy tanteraka ny tsenan’ny fanafaram-bary eto Madagasikara.